Nguo yemusikana WP-3223
Chimiro No.: WP-3223
Ruvara: Muchena / Navy
Mucheka: 95% cotton 5% spandex single jersey, 160gsm + 100% polyester lace; Lower shell: 100% polyester mesh, yakadzika lining: 95% cotton 5% spandex single jersey, 160gsmwith all-over print
Chishongedzo: Sequin, Diamond
Feature: Bhegi chigamba / sequin yakashongedzwa, Mesh kukotama nedhaimani neruoko kusona
Hurukuro: Lace jira pamberi muviri, Pleated pajira riya pamwe mbishi kumucheto muchiuno
Nguo yemusikana XGR-155
Chimiro No.: XGR-155 Ruvara: Bvisa chena Saizi Range: 4-12A Mucheka: Shell: 100% donje ruffly rakarukwa jira; Lining: 100% donje rakarukwa jira 90 × 88 Chishongedzo: Lace, Invisible zipper Matauriro: Embroidery ine tassels, Sleeve nekotoni lace, Lace tepi pazasi
Nguo yemusikana WW-15
Chimiro No.: WW-15
Ruvara: Lt. bhuruu
Mucheka: Shell: 100% polyester lace; Lining: 100% donje rakarukwa jira 90x88
Chishongedzo: Yakarukwa tepi ine mativi esirivheri, Invisible zipper
Hurukuro: Uta hwejira rakarukwa nemativi esirivha kumberi
Nguo yemusikana WP-3095
Chimiro No.: WP-3095 Ruvara: Jeans bhuruu saizi Range: 4-12A Mucheka: 70% donje 30% jutecell kutevedzera sirika jean machira Chishongedzo: Anogadzirisika bhakoro Mashoko:
Nguo yemusikana WP-3006
Chimiro No.: WP-3006 Ruvara: Bhuruu / Muchena mitsetse Saizi Range: 2-10A Mucheka: 100% donje-yadhi-yakarukwa machira machira Chishongedzo: Wooden bhatani, Adjustable buckle Mashoko:
Nguo yemusikana WP-3004
Chimiro No.: WP-3004 Ruvara: Bhuruu / Muchena mitsetse Saizi Range: 4-12A Mucheka: 100% donje-yadhi-yakarukwa machira machira Yekushongedza: Maruva anoshongedza, Pearl, Plastic bhatani Matauriro: Kumberi machira nemaparera, ironed rhinestone, yega- jira uta
Nguo yemusikana LY-609
Chimiro No.: LY-609 Ruvara: Pink / Grey Saizi Range: 1-5A Mucheka: 95% donje 5% spandex single jersey, 160gsm; Lower shell: 100% polyester mesh ine sequins, yakadzika lining: 100% donje rakarukwa jira 90 × 88 Chishongedzo: Sequin Mashoko: Kuiswa kudhinda, sequin machira
Mufashoni asina maoko madhirezi / WP-C1008
Chishongedzo: Sirivheri yakasununguka, Pearl Matauriro: Chiffon pazasi goko nemaruva Chikamu chepamusoro chepinki cheiyi isina maoko chipfeko chekotoni ine spandex, yakapfeka yakasununguka uye inofema, isingatyi mamiriro okunze akanaka muzhizha. Neckline chimiro chakatsetseka chakakombama, chiri nyore uye chine rupo. Rutivi rwemberi rwakashongedzwa nemaparera uye maruva madiki akafanana neasi ezasi siketi yakafanana nehupenyu, zvese izvi zvinotapira uye zvine rupo. Muchiuno musono wakachekwa nesirivha yakasungwa bhandi, iri yemakona akanaka ...